I want free hosting support for wordpress. — MYSTERY ZILLION
I want free hosting support for wordpress.
June 2011 edited June 2011 in Blog
ကျွန်တော် နှစ်သက်​တဲ့ Free hosting က www.hourb.com ပါ​ပဲ။ Bandwidth တွေ​ကော Unlimited တွေ​ချည်း​ပါ​ပဲ။ နှစ်သက်​စရာ တော်တော်​လေး ကောင်း​ပါ​တယ်။ ပြီး​တော့ freehostingcloud.com လို Freedom တွေ သုံး​စရာ မ​လို​ပါ​ဘူး။ သာမန် အင်​တာ​နက် သုံး​သ​လို Signup လုပ်​လို့ ရ​ပါ​တယ်။ သုံး​ရ​တာ​လည်း လွယ်ကူ​ပါ​တယ်။ စမ်း​ကြည့်ပါ​ဦး ခင်​ဗျာ။
freehosting တွေရဲ့ unlimited ဆိုတာကိုမယုံပါနဲ့။ ဘယ်သူကမှ အခမဲ့ရော အခနဲ့ကို ကို unlimited မပေးပါဘူး။ ဘယ် hosting မှာ၀ယ်၀ယ် limited ချည်းပါပဲ။
Hello mate! If you are finding free hosting, I can give you free with my website subdomain. It will look like yoursite.myanmarpeople.org. if it sounds like you, just drop email to [email protected]